Author Topic: Saxaro Adayg iyo Calool Fadhi (Constipation) (Read 81821 times)
« on: October 31, 2007, 04:17:40 PM »
Caloosha oo fadhido ama saxarada oo adag waa dhibaatada ugu wayn ee keento cillado badan oo ay ka mid tahay Baabasiirka.
Waa maxay saxaro-adayg?
Saxaro adayg ama Calool-fadhi waxaa loola jeedaa saxaro aad u adag ama in qofku si sahlan u saxaroon karin.
Saxaro-adaygga waa cillad da' kasta ku dhacdo, inkastoo lagu kala duwan yahay laakiin qof aysan soo marin way yartahay.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa:
In aad u baahato in aad iska soo riixdo
Aad dareento in ay saxaradu kaa soo dhammaannin
Aad qabtid casiraad, xanuun, dibbiro ama lalabbo
Qof kasta wuu ka duwan qofka kale, laakiin dadka badankoodu waxay saxaroodaan inta u dhexeysa 3 goor maalintii ilaa 3 goor toddobaadkii. Ilaa iyo inta saxaradu ay jilicsan tahay ayna fududdahay in ay soo gudubto, markaas saxaradu kuma adka.
Saxaro-adaygga dadka qaar muddo kooban ayay haysaa, dad kalane dhib ayay ku heysaa muddo dheer.
Waa maxay asbaabta saxaro adayga keento?
Cunto uu ku sarreeyo dufanka iyo sonkorto ama uu ku yar yahay buunshuhu
Aadan cabbin cabitaanno kugu filan
Aad noqoto qof aan fir-fircooneyn
Aadan aadin musqusha marka ay saxaro ku qabato ama aad musqusha u baahan tahay
Aad isticmaasho daawooyinka qaarkood oo saxarad adkeeyo
Aad joogteyso isticmaalidda daawooyinka caloosha jilciya
Haddii aad xanuunka niyad jabka ama diiqada aad qabtid
Caruurta haddii ay ka cabsadaan musqusha ama isticmaalkeeda dhib ku yahay waxaa ku dhaca Saxaro-adayg
Sidee looga hortagaa saxaro adayga?
Cun cuntooyin ay buunshuhu ku sarreeyaan sida siiriyaalka buunshaha leh, rootiyada miraha isu dhan ka sameysan, khudradda aan la karin, furutooyin cusub ama kuwo la engejiyey, looska iyo daangada. Buunshuhu wuxuu caawiyaa in saxaradu si fudud jidhkaaga u soo marto.
Cun tufaaxa si ay kaaga caawiyaan saxaro jilcan.
Jir dhis samee si uu kaaga caawiyo in saxaradu si fudud kaaga timaaddo. Socodka si fiican ayuu wax uga taraa.
Takhtarkaaga kala hadal ka hor inta aadan isticmaalin wax daawooyin caloosha jilciya oo farmashiga laga soo iibsado. Takhtarkaagu waxaa laga yaabaa in uu kuu soo jeediyo saxaro jilciye ama calool jilciye habboon. Haddii aadan ka helin daawada natiijooyinkii aad dooneysay, takhtarkaaga la xiriir.
Waa maxay dhibaatooyinka Saxaro-adaygga ay keenaan?
Cudurka Baabasiirka: Ka akhriso halkaan qoraal ku saabsan: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,891.0.html
Saxarada in ay mindhicirrada xirto oo qabsin isku badasho.
In neerfaha kontroola saxarada uu dhaawac gaaro oo qofku saxarada ceshan kari waayo.
Jiirashada waxay keeni kartaa xanuunka futo-dillaaca: Ka akhriso halkaan waxa uu yahay
Si dabiici ah u jilci calooshaada inta aadan daawo raadsanin adigoo raaca tillaabooyinka kor ku xusan, daawada waa xal ku meel gaar ah, haddii aad joogteysane iyadaa dhib kale kuu keenayso.
Haddii aad su'aalo dheeraad ah aad qabtid waad na soo waydiin kartaa
Started by Mumtaz19Board Qaybta Su'aalaha
Views: 2330 February 09, 2020, 12:37:41 PM
Su'aal: Saxaro la'aan 4 malin ama 3 malin?
Started by UmuabdallaBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 3873 August 23, 2017, 07:13:17 PM
Views: 11164 February 11, 2009, 10:43:07 PM
Su'aal: Calool majiirka ilmaha dhashey?
Started by Elmi HirabeyBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 35276 August 21, 2015, 02:39:22 PM
Su'aal: Calool uurka kadib fakatey?
Views: 2634 August 31, 2016, 08:44:05 PM